Usha ka hortaga uurka | Zanzu
Qaabka ka hortagga uurka (qaabka ka hortagga uurka). Usha ka hortaga uurka waa mid yar oo u qaabaysan sida usha. Dhakhtarka waxa uu geliya shaygaas hoosta maqaarka gacankta sare ee haweenayda. Qalabka gelinta ka hortagga uurku waxay saamayn leedahay ilaa 3 sanadood.
Ka hortagga farjiga gudahiisa la geliyo;
Wax ku biirinta shakhsiga ah